चर्चित बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई सर्पले टो’क्यो - टि. एल. एन पोस्ट
Home फिल्म बलिउड चर्चित बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई सर्पले टो’क्यो
बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई सर्पले टो’के’को छ । क्रिसमस मनाउनका लागि परिवारसित पानभेल फार्म हाउस गएका बेला उनलाई सर्पले टो’के’को भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
आइतबार बिहान साढे ३ बजे उनलाई सर्पले टो’के’को जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यसपछि उनलाई नवी मुम्बईको कामोठे क्षेत्रस्थित महात्मा गान्धी मिशन अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
रातभरि उनको उपचार गरे र त्यसपछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार देखेपछि डिस्चार्ज गरिएको थियो। उनि बिहान करिब ९ बजे फेरि आफ्नो फार्म हाउस पुगेका हुन् । समाचार अनुसार उनलाई टो’के’को सर्प वि’षा’लु थिएन । त्यसैले पनि उनलाई खासै असर परेको छैन । उनको फार्महाउस वरपरको क्षेत्र पहाड र जंगलले घेरिएको छ । त्यस ठाउमा प्रायः सर्प र अजिंगर देख्न पाइन्छ।
सलमान खानले चाँडै नै आफ्नो आगामी फिल्म टाइगर ३ को सुटिङ सुरु गर्ने बताइएको छ । उनले यस पटक मुम्बईमा नभई दिल्लीमा कट्रिना कैफसँग फिल्मको फाइनल शेड्युल सुटिङ गर्नेछन् । निर्देशक मनीष शर्माको यो चलचित्रको छायांकन माघ १५ गतेपछि सुरु हुने र करिब १५ दिनसम्म विभिन्न स्थानमा सुटिङ गरिने छ ।
यसअघि टाइगर ३ को सुटिङ रुस, टर्की, अष्ट्रेलिया र मुम्बईमा गरिएको थियो । यो फिल्मको सुटिङ बीचमै रोकिएको छ । यसको कारण सलमान आफ्नो फिल्मको प्रमोशनमा व्यस्त हुँदा कट्रिना आफ्नो विवाहमा व्यस्त थिइन् । अहिले दुवै स्वतन्त्र छन् र चलचित्रको छायांकन जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न होस् भन्ने निर्माताको चाहना छ ।
तपाईलाई बताउन दिनुहोस् कि टाइगर फ्रान्चाइजी जासूस फिल्महरूको एक श्रृंखला हो, जसको पहिलो भाग २०१२ मा आएको थियो। यसलाई कबिर खानले निर्देशन गरेका थिए । पहिलो फिल्मको सफलतापछि निर्माताहरूले टाइगर जिन्दा हेको दोस्रो भाग २०१७ मा रिलिज गरेका थिए । यसलाई अली अब्बास जफरले निर्देशन गरेका हुन् ।
Previous articleकर्णालीमा १७ वर्षीया छोरीले दिइन् बुवालाई दागवत्ती
Next articleसम्बन्धविच्छेदको लागि श्रीमतीले राखिन् श्रीमानलाई ८ हजार वर्ष कैदको शर्त
TLN Post - December 15, 2021 0
बलिउड अभिनेता जोन अब्राहम मंगलबार एकाएक चर्चामा आएका छन् । उनी चर्चामा आउनुको कारण इन्स्टाग्राम अकाउन्टको पोस्ट डिलिट हो । जोनले इन्स्टाग्रामको एक/दुईवटा मात्रै नभएर...
बलिउड अभिनेत्री पायल घोषले आफूमाथि एसिड आक्रमणको प्रयास भएको र आफू मुस्किलले बचेको बताएकी छिन् । सामाजिक संजालमार्फत एक भिडियो जारी गर्दै पायलले केही...
अभिनेत्री काजल अग्रवाल हालका दिनमा गर्भवती भएको खबरले चर्चामा छिन् । गत वर्षको अक्टोबर ३० मा प्रेमी गौतम किचलूसँग काजलले मुम्बईमा विवाह गरेकी थिइन्...
यी हुन् कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि (सूचीसहित)
‘क्युआर कोड’ सहितको खोप प्रमाणपत्र कसरी लिने ?